Iindaba - Isikhokelo esigqibeleleyo sazo zonke ezona grinders zingcono zokuthenga ngo-2021.
Kungakhathaliseki ukuba vape, uqengqe amalungu okanye uthathe rips bong; xa kufikwa ekutshayeni ukhula, kuhlala kukho into ekufuneka ubenayo: grinder efanelekileyo. Nazi izinto zethu ezikhethileyo zokugaya ezilungileyo kwimarike ngoku.
Nokuba uyiphi na i-newbie ye-cannabis okanye umntu othanda amava xa kufikwa kukhula, kukho into ebalulekileyo kwiseshoni eyimpumelelo: imifuno esemhlabeni efanelekileyo. Nokuba uyatshaya okanye usebenzisa i-vape-user, eyona nto kufuneka usoloko unayo kuwe sisisisi sakho. Isizathu silula; udinga intle, usikhule ukhula olunokutsha kakuhle. Ngoba? Ngenxa yokuba indawo engaphezulu ithetha ukuphakama okungcono.
Abanye abantu basebenzisa isikere, iminwe yakho inokwenza ubuqhetseba, kodwa akukho ndlela ithelekiswa ne-grinder endala ethembekileyo. Ziza ngazo zonke iimilo kunye nobukhulu, ungazifumana nakweyiphi na into onokuyicinga, kunye nezinto ezintsha ezenziwe kutshanje, uya kufumana ezinomdla ngokwendlela yoyilo kunye nokusebenza. Ubuchule kunye netekhnoloji zihlala ziphucula inkqubo yokusila, kwaye ukuba ukugaya kuyavela, ukutshaya kuyavela ngokunjalo.
Jonga olu khetho lweyona grinders zilungileyo kwintengiso okwangoku kwaye ubone ukuba yintoni eyenza ukuba isila siphume kwabanye.
Kutheni usebenzisa iGrinder yokhula?
Usebenzisa amazinyo abukhali kunye namandla esandla esincinci, okanye ucofe iqhosha ukuba usebenza nolunye lweentlobo zombane ezithandwayo, isikhululo sokhula sikrazula imifuno yakho ukuze ungazisindisi ngozipho okanye ubingelele kuphela isikere onaso endlwini. Ngenxa yoko, ufumana umngxunya womhlaba otshayekayo ngaphandle kokubila.
Xa usebenza ngaphandle kwe-grinder, awukwazi ukufumana imifuno yakho ngokufanelekileyo ngokutshisa ngokufanelekileyo, ngakumbi ukuba yile-sticky-icky. Ungakhankanyi, awunakufumana i-kief, ii-trichomes ezinentlaka ezikhazimlayo kuyo yonke i-bud yakho kwaye zinamandla amakhulu. Hayi ngokulula, ubuncinci.
Unokuchitha imizuzu usika, okanye okubi ngakumbi, ukhetha i-bud yakho. Okanye, unokusebenzisa i-grinder kwaye uqhekeze istash sakho ngemizuzwana kwaye ufumane i-kief, onokuyifefa ngaphezulu kwentyatyambo yakho ukuyiphucula. Thetha nge-icing kwikhekhe.
Iigrafu zikwaqinisekisa nokutsha. Ukuba upakisha isitya nge-chunky bud, awungekhe uzalise ngokupheleleyo isitya, kwaye uyasichitha ngoba asikwazi ukusitshisa ngokugqibeleleyo. Ngapha koko, kunzima ukuxhokonxa, kwaye amaxesha amaninzi kunokuba kunjalo, kusekho okusaseluhlaza okushiyekileyo, ongayi kukuqonda de ube uyokulahla "uthuthu".
Abantu abatshayayo abadibeneyo nabangenangqondo baya kuxhamla kwi-grinder yokhula. Ukhula oluye lwahlawuliswa (kodwa alulunganga kakhulu) ukugawulwa kunokubekwa ngokulinganayo emaphepheni kwaye kwenza inkqubo yokuqengqeleka ibe nomoya. Kwaye batshaya ngcono, nabo.
Iindidi Zokuguba Ukhula
Zimbini iintlobo eziphambili zezinto ezisila ukhula: iintyatyambo zokugaya kunye nezokusila kombane. Ngokusila kweencwadana, kufuneka umgudu ongaphezulu. Kufuneka ujike kwaye ujike usebenzisa izandla zakho ukwenza umsebenzi.
Ngokubhekisele kwiindleko zesixhobo sokusila, amaxabiso ayahluka kodwa uninzi luthathwa njengolufikelelekayo luluntu lokhula. Konke kuxhomekeke kuhlobo, njengoko zininzi iintlobo zeesixhobo sokugaya:
I-2-Piece Weed Grinder: igumbi elinye lokusila nokugcina.
I-3-Piece Weed Grinder: amacandelo amabini, elinye lokusila kunye nelokugcina.
I-4-Piece Weed Grinder: iigumbi ezintathu, enye yokugaya, enye yokugcina, enye ye-kief egcwaliswe ngescreen.
Nangona bengadumanga, kukwakho iziqwenga ezi-5 zencwadana yemigaqo. Olu hlobo luhlala lunamacandelo amane: ukusila, ukugcina, kunye ezimbini zekiff. Ukuba neentlanzi ezimbini ezinokukunceda ubambe umgubo weentyatyambo onamandla kuba inescreen esongezelelweyo sokubambisa izinto ezincinci zezityalo.
I-grinder yekhadi lolunye uhlobo lwe-grinder yesandla engenazo naziphi na izinto kwaye incinci kwaye iyaphatheka. Abagayi bamakhadi abayi kusila kunye nezinye izinto ezisilayo, kwaye abayi kubamba i-kief, kodwa bayabiza kwaye benza lula ukugaya ekuhambeni.
Ngaphandle kokwenziwa ngenani elahlukileyo leenxalenye, izixhobo zokugaya ukhula zenziwe ngezinto ezahlukeneyo, nganye kuzo inezinto ezilungileyo nezingalunganga:
Iplastiki: ngexabiso eliphantsi, ngokulula, kwaye ibonelela ngokugaya kulungile, ayihlali ixesha elide, kwaye kunokwenzeka ukuba yaphuke.
Inkuni: eyahlukileyo, eyindalo, inokuvelisa ukucheba kwesinyithi ngelixa isetyenziswa kwaye ithathe umzamo omkhulu wokuguba.
I-Aluminium: isinyithi esinexabiso eliphantsi, sihlala ixesha elide kuneplastiki, sinobunzima obungaphezulu kweplastikhi, kulula ukuyisebenzisa, kwaye sinikezela ngokusila okuhle.
I-Titanium: eyona mgangatho uphezulu, ayinobunzima obungange-aluminium, ibiza kakhulu, yakhiwe ukuze ihlale ixesha elide, kwaye isebenziseka lula.
Okokugqibela, une grinders zombane. Abagashi bombane benza wonke umsebenzi kuwe, kwaye abanye baya kuluhambisa ukhula lwakho, olubenza balungele ukuqengqeleka. Bajwayele ukuba kwicala lomthengi kwaye ngekhe balondoloze i-kief, kodwa ukuba ungumntu onesifo samathambo okanye unesandla esibuhlungu, iigrinders zombane zisusa uxinzelelo kwinkqubo yokugaya.
Olona hlobo lweGrade yoKhula oluLungileyo
Ukuba ucinga ukuba ukhetho lweglasi kunye ne-vaporizers lubanzi, awuzange uzame ukuthenga eyona grinder yokhula ilungileyo. Kukho amawaka akhoyo, kwaye akho kuyo yonke indawo, ukusuka kwiintloko ukuya kwiAmazon. Ubaleka nasemngciphekweni xa uthenga into yokusila kuba ungazi ukuba bazakusebenza de uthenge. Kukho izinto ezimbalwa ezimbi ngaphezu kokuchitha imali kwisixhobo esenza umsebenzi obuthathaka.
Ukukhetha uphawu oluchanekileyo kuyo yonke into xa ufuna esona sigqibi sokhula silungileyo. Ukuba uphawu lunempendulo embi, unokulindela ukufumana imveliso engenamsebenzi, engenamsebenzi. Xa ukhangela olona hlobo lwegrilla yokhula olulungileyo, qiniseka ukukhulisa ezo zinophononongo lwenkwenkwezi kunye nobungqina.